भगवान शिवको जन्म कहिले भयो ? - Sabal Post
भगवान शिवको जन्म कहिले भयो ?
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
भगवान शिवलाई अजन्मा र अविनाशी भनिन्छ । शिवपुराणको कथामा भनिएको छ ब्रह्मा विष्णुलाई पनि अन्तिमसम्म थाहा थिएन । तर यीन को जन्ममा पनि एक रोचक छ, भगवानु ब्रह्मा, विष्णु र महेश यी तिन देवताहरुको जन्म आफैमा एक महान कहानी भएको छ । केही पुराणमा भनिएको छ कि ब्रह्मा र बिष्णु शिवबाट उत्पन्न भएका थिए । तर पुराणमा नै यस कुराको खण्डन गरेका छन् फेरी शिवको जन्म कहिले भयो त ।शिव पुराणका अनुसार शिव स्वयंभु वा आफै जन्मेका हुन् भनिएको छ ।
शास्त्रमा यस विषयलाई लिएर भनिएको छ जब कुनै र कोहि पनि नरहेमा वा सबैकुरा नष्ट भएमा पनि उनी बाचीरहन्छन । यसकारण उनलाई ‘आदीदेव’ भनिएको हो । उनै आदी देवबाट नै ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको बताइएको छ । जो सबै देवताहरुमा पहिलो हुन् । कथाको अनुसार भगवान ब्रह्मा र विष्णु जन्मेपछि दुवैमा बहस सुरु भएको थियो को श्रेष्ठ हो भनेर । त्यत्ति नै बेला अचानक चमत्कार लिंग देखियो । त्यसपछि आकाशवाणी भयो ‘जसले यो लिंगको सुरु र अन्तिम पत्ता लगाउछ त्यो नै ठुलो हुनेछ । ’भगवान विष्णु तल्लो भागमा गए र ब्रह्मा माथिल्लो भागमा गई कयौ वर्षसम्म खोजे तर नत लिंगको सुरु भेटियो नत अन्तिम नै ।
भगवान विष्णुलाई महसुस भयो ज्योर्तिलिंग एक परमशक्ति हो यस ब्रह्माण्डको मुलभुत कारण हो र यहि भगवान शिव हुन् । उक्त समयमा फेरी आकाशवाणी भयो र भनियो ‘म शिवलिंग हु र मेरो कुनै आकार हँदैन म निरंकार हु । ’भगवन शिवको जन्मको विषयमा यो कथा सँगै अरु पनि कथा छन् । वास्तवमा शिवको ११ अवतार मानिएको छ । यी अवतार मध्ये रुद्रावतारको कथा निकै प्रचलित छ । पुराणको अनुसार जब सृष्टि उत्पन्न गर्नमा ब्रह्मालाई कठिनाई हुन लाग्यो अनि ब्रह्मा रुन लागे । ब्रह्मा जीको आँसुबाट भुत प्रेतको जन्म भएको थियो भने उनको मुखबाट रुद्र उत्पन्न भए । रुद्र भगवान शिवको अंश र भुत प्रेत उनको सेवक मानिएको छ । धार्मिक ग्रन्थको सहयोगमा/reportersnepal
पिपी प्रसाईं राष्ट्रिय उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारबाट सिद्धबाबा…
आजको राशीफल तपाईको दैनीक कस्तो रहन्छ
नेपाली सेनाको सेना दिवस विशेष कार्यक्रम
प्रसिद्ध निङ्गलाशैनी भगवती मन्दिरमा अनन्त चर्तुदशीको अवसरमा…
शनिबार बिहान दुई पटक भूकम्पको धक्का महशुस
विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी भिसा नदिने कानून ल्याउँदै अमेरिका
थाकस र थापस द्वारा श्रद्धान्जली कार्यक्रम सम्पन्न
सरकारले बलत्कारी बचाएको ने.वि.संघको दाबी
बिपत ब्यवस्थापन समितिको समुहले पहिरो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन तत्काल उद्धारमा…
नेपाली कांग्रेस वडा समितिद्धारा सम्मान
स्थानीय भन्छन् सुमित जस्तै ईन्चार्जको लहानमा खाचो छ
रुपन्देहीका शिब राज बेल्बासेको संयोजकत्वमा साझा युवा संगठन प्रदेश नम्बर…
पहिरोबाट विस्थापित ३ परिवारलाई गुल्मी चारपाला रुपन्देही सम्पर्क समाजको सहयोग